Maharmedianews – Page 3
ပလပ်စတစ်ကောက် အကြောင်းပြပြီး ရပ်ကွက်ထဲမှာ လိုက်ခိုးနေတဲ့ အဖွဲ့ကို ၀ိုင်းဝန်းဖမ်းဆီး
December 6, 2019 admin555
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကန့်ဘလူခရိုင် ကျွန်းလှမြို့ပေါ်နေရာတိုင်းမှာ မယောက်တဲ့နေရာကိုမရှိဘူးရပ်ကွက်တိုင်းရပ်ကွက်တိုင်းကိုယခုရက်ပိုင်းနေအိမ်အချို့နှင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများပစ္စည်းအပြောက်များနေတယ် ခုတောင်မှ ရှမ်စုရပ်ကွက်နေ ကိုသူရနေအိမ်မှ ပစ္စည်းများ ခိုယူထွက်ပြေးလို့ ရပ်ကွက်နေပြည်သူများမှ ဝိုင်း ဖမ်းပေးလိုက်ကြပြီ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲ. . . ကန့်​ဘလူ — ကျွန်းလှ ဒီနယ်​တဝိုက်​မှာပလပ်​စတစ်​​ကောက်​တာ
December 6, 2019 December 6, 2019 admin555
မိနျးကလေးတှပေိုပွီးသတိထားပေးကွပါ။ ငယျ့အလုပျကလှညျးတနျးမှာပါ။ လှညျးတနျးကနအေမွဲ ၃၈.၁၄စီးပွီးအိမျကိုပွနျပါတယျ ဒီနရေုံ့းကအကိုကွီးနဲ့အတူတူ၃၈စီးကွပါတယျမွနျမာပလာဇာရောကျတော့အကိုကွီးကဆငျးသှားတယျငယျလဲနရောရတယျ နောကျဆုံးတနျးမှာပါ။ဘေးနားကဦးလေးကွီးကအစက fbသုံးနတောပါ အျောကိုလဲသူလဲသုံးမှာဘဲလငေါတို့တောငျသုံးသေးတာဘဲဆိုပွီးအေးအေးဆေးဆေးပါဘဲ ရနျကငျးနားလောကျကနစေပွီးညဈညမျးတဲ့ကားတှကွေညျ့လာပါတယျ အစကတော့မသိပါဘူး သူကငယျ့ဘေးနားအထိကိုတိုးလာတာပါ အရမျးတိုးတော့ငယျလဲကွညျ့လိုကျရောညဈညမျးတဲ့ကားတှကွေညျ့နပေါတယျ အာ့တာနဲ့ငယျလဲဘေးနားကအမတဈယောကျကိုလကျတို့ပွီးအကူအညီတောငျးလိုကျပါတယျ အဲ့ခြိနျလကျဖြားခွဖြေားတှပေါအေးပွီးတျောတျောကွောကျနပေါပွီ ။ အျောလဲမအျောရဲဘူးသူတို့က၃ယောကျတောငျပါ။အရှမှေ့ာရပျနတေဲ့အကိုကိုလကျတို့ပွီးလာထိုငျခိုငျးလိုကျပါတယျအဲ့လူကွီးကလညျးခတျြခငျြးဘဲသူ့ဖုနျးကိုသိမျးလိုကျပါတယျတမငျတကာမိနျးကလေးအရှမှေ့ာညဈညမျးကားတှကွေညျ့တာပါ။ သားသမီးခငျြးလဲကိုယျခငျြးမစာတတျကွတော့ပါဘူး။ ပငျးယရောကျတော့ဆငျးသှားကွပါတယျအဲ့ကွမှသူငယျခငျြးဆီဖုနျးဆတျပွီးပွောပွရတာပါမတျြရညျတှလေဲကပြွီးဘာမှလဲမလုပျနိုငျပါဘူး အဲ့အမလဘျးငယျကိုအိမျအထိလိုကျပို့ပေးသှားပါတယျ။ ကြေးဇူးလဲတငျပါတယျအမရယျ
ပင်စင်ယူခါနီး ဆရာမကြီးကို ကျောင်းသူ/သားတွေရှေ့မှာ ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူက ကြိမ်လုံးနှင့်ရိုက်
#📢ပညာရေးဝနျကွီးဌာနမှထိရောကျစှာအရေးယူပေးပါ။ #ဖွဈစဥျနစှေဲ့။ ။3.12.2019နေ့ နလေ့ညျ၁၂နာရီ၃၀မိနဈခနျ့ #ဖွဈပှားရာနရော။ ။ဆဌမတနျးစာသငျခနျး(G-7D) #ဖွဈပှားခြိနျ။ ။ကြောငျးသူကြောငျးသားမြားအားစာသငျကွားနခြေိနျ(ဆရာ မလာ၍အစားထိုးဝငျသငျပေးခြိနျ) #ဖွဈပှားရာကြောငျး။ ။အထက(၅) မဂျလာဒုံ ရနျကုနျ။ #ကြူးလှနျစျောကားသူ။ ။ကြောငျးအုပျဆရာမဒျေါဆှဆှေမွေငျ့ #အစျောကားခံရသောဆရာမ။ ။ဒျေါမူမူ (ဆဌမတနျးကြောငျးသူကြောငျးသားမြားအားစာသငျပွနသေောအသကျ၅၇နှဈအရှယျရှိ အဲ့ကြောငျး၌စာသငျကွားနသေညျမှာအနှဈနှဈဆယျရှိပီးဖွဈပါတယျ။) အထက(၅)မဂျလာဒုံ
” NLDပါတီ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၏ နေအိမ် လက်ပစ်ဗုံး နှင့် အပစ်ခံရ”
၂၀၁၉ဒီဇင်ဘာလ(၃)ရက်(၁၉း၀၅)အချိန်တွင် တမူးမြို့ ဈေးတန်း(၂)ရပ်ကွက်|မာဃလမ်းအိမ်အမှတ်(၂/ဈ၀၄၃)နေNLDပါတီအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်မောင်လတ် ၏နေအိမ်အတွင်း လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံး တွေ့ရှိကြောင်းသတင်းအရဒကစ(ကလေး)မှ ဒု-ဒကစမှူးကြီး ညီညီတင်|ရတခလရ(၂၆၆)ခေတ္တရင်းမှူး ဝေလင်းစိုးဦးစီးအဖွဲ့| တမူးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်ဝင်းဦး ဦးစီးအဖွဲ့|ခရရ(တမူး)မှ ခရရမှူး ဒုရဲမှူးကြီးလင်းလင်းနိုင် ဦးစီးအဖွဲ့တို့မှသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းခြံစည်းရိုးနှင့် ၈ပေခန့်အကွာ၌91 အမျိုးအစားလက်ပစ်ဗုံး ၁လုံးနှင့် ၃ပေခန့်အကွာ၌
ပေါင် ဒီဇင်ဘာ ၃ အသက်၁၃နှစ်၈လရှိပြီး ၈တန်းကျောင်းသူတစ်ဦးကို ရဲပြားကုန်းကျောင်းဆောက်လုပ်နေသော အလုပ်သမားတစ်ဦးက စာသင်ပေးမည်ဟု ညာခေါ်သွားပြီးသားမယားပြုကျင့်ခဲ့သဖြင့်အဖွားဖြစ်သူကရဲစခန်းကို တိုင်ကြားထားပြီးသက်ငယ်မုဒိမ်းမှုဖြင့် ရဲကအမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေသည်။ ပေါင်မြို့နယ် သဲဖြူကုန်းကျေးရွာ ရဲပြားကုန်းတွင် နေသူ မxxxxသည် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့ ည၈နာရီက
နေအိမ်ကထွက်သွားပြီး ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သမီးကြောင့် ဖခင်ဖြစ်သူ အိပ်ရာထဲ လဲနေ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝေါမြို့နယ် မြစ်ကျိုးတိုက်နယ် ဆင်ရွာကျေးရွာ ဦးကျော်မင်းထိုက်+ဒေါ်မဇင်တို့၏သမီးလေးမအိသဇင်ကျော်ရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်.. မိဘများမသိပါပဲနေအိမ်မှထွက်ခွာ/ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။ ယခုအခါ.ဖခင်.ဖြစ်သူဦးကျော်မင်းထိုက်မှာ.သမီးကိုရှာမတွေ့ရသည့်စိတ်ဖြစ်အိပ်ယာထဲဘုံးဘုံးလဲကာမမာမကျန်းဖြစ်နေပါသောကြောင့်းသမီးလေးမအိသဇင်ကျော်အနေဖြစ်ဤပို့ကိုတွေ့ရှိပါကအောက်ဖော်ပြပါ ဒေါ်ယုယု.၏.ဖုန်းနံပတ်ကိုဆက်သွယ်၍အမြန်ဆုံးပြန်လာပါရန်မိဘနှစ်ပါးကိုယ်စား.ပိုစ့်.တင်၍ အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်ခင်များ” သမီးလေး. မအိသဇင်ကျော်ဆက်သွယ်ရန်ဒေါ်ယုယုဖုန်း.09 767603734.သမီးလေးမအိသဇင်ကျော်.ကိုတွေ့ရှိသူမိတ်ဆွေများ. ဖော်ပြပါဖုန်းနံပတ်ကိုဆက်သွယ်ကူညီပေးကြပါရန်လေးစားစွာအကူအညီတောင်းခံအပ်ပါတယ်ခင်များ” သူများ လိမ်ပြီး ခေါ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်း အန္တရာယ်ကင်းပါစေ. . .ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် သွားတယ်ဆိုရင်လည်း.
ပရိတ်သတ်ကို လေးစားတန်ဖိုးထားပြီး နိုင်ငံတော်အတွက် တာဝန်ကျေလွန်းလှတဲ့ ခီမောင်နှံရဲ့ လေးစားဖွယ် လုပ်ရပ်
December 3, 2019 December 3, 2019 admin555
” ရုပျရှငျကားကွီး ဝငျငှမြေားမှ နိုငျငံတျော သို့ သိနျးပေါငျး ၁၈၀၀ နီးပါး အခှနျဆောငျခဲ့သညျ့ ဒါရိုကျတာ ခရစ်စတီးနားခီ” “ထာဝရနှောငျကွိုး” ဇာတျကားကွီးသညျ ရုပျရှငျခဈြပွညျသူအမြား၏ အားပေးခြီးမွှောကျမှုကွောငျ့ ရုံတငျဝငျငှေ သိနျးပေါငျး ၂ သောငျး ၄
ကျားဖောင်က ရေလုပ်သားတွေကို ဆေးကုပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပြောပြတဲ့ ထိတ်လန့်စရာ “ကျားဖောင်”အကြောင်း
ဖတ်ကြည့်ပါ.. တကယ်တော့ ကျားဖောင်ဆိုတာ ကျမ ဖျာပုံ နဲ့ ကျုံကဒွန်းတိုက်နယ်ဆေးရုံမှာ တာဝန်ကျထဲက နမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားလွန်းလို့ မကြားချင်မမြင်ချင်မှ အဆုံးကြားခဲ့မြင်ခဲ့ရတယ့်အရာ။ အဲ့ဒေသက လူတွေက ကလေးတွေဆိုးရင် ပြောမရရင်တောင် ကျားဖောင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်ရမလားလို့ ပြောတာ ကြားဖူးနေကြ။ ဆေးရုံကို ပင်လယ်က
သတိပေးကြေညာခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၃၀)ရက် စနေနေ့ (1)ဦးလှိုင်ဝင်း (ဇာတ်ပွဲမန်နေဂျာ) (2)ဦးအောင်မျိုးဦး(မင်းသားဦးလေးတော်စပ်သူ) (ဇာတ်ပွဲမန်နေဂျာ) ဆန်းသစ်တည်ထွင် စွမ်းသဘင်စွမ်းဇာနည်ကတဲ့ဇာတ်ပွဲအထက်အမည်ပါဇာတ်ပွဲမန်နေဂျာများသိရှိစေရန်သတိပေးကြေညာအပ်ပါသည်/နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ချောက်မြို့မဟာအေးစေတီ ဘုရားပွဲတော်ကြီးတွင်၁၃၈၁ခုနှစ်တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၆/၇/၈)(၃)ညတိုင်တိုင် စွမ်းဇာနည်ဇာတ်ပွဲကပြရန်အတွက်28/8/2019နေ့တွင်ဇာတ်ပွဲမန်နေဂျာဦးလှိုင်ဝင်း နှင့်ဇာတ်ပွဲဌားရမ်ခြင်းစရံပေးကတိစာချုပ် ချုပ်ဆို၍ ပထမအကြိမ်စရံငွေ(သိန်း ၃၀)ကျပ်အားလည်းကောင်း 10/9/2019နေ့တွင်မင်းသားဦးလေးတော်စပ်သူဇာတ်ပွဲမန်နေဂျာဦးအောင်မျိုးဦး
“ဘယ်သူ ပစ်ခဲ့ ပစ်ခဲ့. . ငါတို့ကောက်မယ်” ဆိုတဲ့ “အမှိုက်(၁)ထုပ် နှင့် အင်္ကျီ (၁) ထည် လဲလှယ်ရေး” အစီအစဉ် စတင်
ဘယ်သူပစ်လဲ့ ပစ်ခဲ့ ငါတို့ကောက်မယ် အမှိုက်=အင်္ကျီ အမှိုက်(၁)ထုပ် နှင့် အင်္ကျီ (၁) ထည် လဲလှယ်ရေး ကမ်ပိန်း ပျဉ်းမနားမှာတော့ လုပ်သွားပြီ. . . အမှိုက်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ challenge တွေ ကမ်ပိမ်းတွေလည်း